Araho an-tsary ny fananganana ny trano fampiantranoana vonjimaikan’ny fikambanana | Grandir à Antsirabe
Araho an-tsary ny fananganana ny trano fampiantranoana vonjimaikan’ny fikambanana
→ Asa fampandrosoana ifotony – Asa ifanomezan-tanana 2017
Nanomboka tamin’ny taona 2008, isan-taona, ny fikambanana Grandir à Antsirabe dia mametraka asa fanorenana ifanomezan-tanana amin’ny asa fampandrosoana ifotony.
Ny vinan-kasa « asa fanorenana ifanomezan-tanana » dia asa fanatsarana na fananganana toerana ao anatin’ny sehatry ny fanabeazana, sosialy na fahasalamana. Ohatra : fananganana sekoly, fananganana tobim-pahasalamana amin’ny fitsaboana natoraly, ny trano fampiantranoana vonjimaika ho an’ny ankizin’ny lalana…
Asa fanorenana ifanomezan-tanana 2017-2018 : fananganana trano fampiantranoana vonjimaika an’ny fikambanana.
Ny trano fampiantranoana vonjimaikan’ny fikambanana dia nanomboka tamin’ny volana oktobra 2016.
Ny trano dia misokatra amin’ny 5ora Hariva katramin’ny 7 ora sy sasany maraina ; handraisana ireo ankizin’ny lalana izay ahafahan’izy ireo misakafo, misasa, henoina teny ary matory am-pilaminana. Ireo mpanabe eto amin’ny fikambanana dia manatanteraka asa fampianarana, fitaizana, fanatanjahan-tena fa ihany koa fandraisana an-tanana ny fahasalamana sy ny ara-toe-tsaina ary ny fametrahana fifampiresahana ho fihainoana ireo ankizy.
Izany dia ny fananganana ny trano ho fampiantranoana vonjimaika sy ho biraon’ireo ekipa mandrindra ny lamin’asa ho fiarovana ireo ankizin’ny lalana izay vinavinaina ho an’ny taona 2017-2018. Io fananganana io dia ahafahan’ny fikambanana miala amin’ny hofan-tranon’ny fampiantranoana vonjimaika izay mitentina 6 000 000 Ar isan-taona. Ahafahana ihany koa manatanteraka vina lavitr’ezaka amin’ny lamin’asa ho fiarovana ireo ankizin’ny lalana. Ny taona 2017, ny fananganana dia mifantoka manokana amin’ny ambany rihana sy ny rihana voalohany.
Arak’izany, io asa fanorenana io dia vokatry ny fifanomezan-tanana iarahana amin’ny :
Ireo ekipa mpisehatra amin’ny asa fanorenana eto an-toerana
Ireo tanora vahiny mitsidika an’i Madagasikara izay ao anatin’ny fivahinianana ifanomezan-tanana. Ireo ekipa matihanina malagasy izay manazava azy ireo ny tokony atao ary miara-miasa sy mifanome tanana amin’ny fanaganana na fanatsarana ireo toerana voakasik’izany.
Ireo mpamatsy vola (ohatra : fondation TELMA, Holcim Madagascar…)
22 décembre 2017 – finition
13 octobre 2017 – Rez de chausée
13 octobre 2017 – Coffrage 2e étage
13 octobre 2017 – Coffrage 1er étage
13 octobre 2017 – 1er étage
04 octobre 2017 – Élévation brique 1er étage
28 septembre 2017 – Elévation briques 1er étage
11 septembre 2017 – Armature et ferraillage
07 septembre 2017 – base mur 1è étage
28 Août 2017 – Thibault au chantier
28 Août 2017 – travail d’équipe étudiants/ouvriers
26 Août 2017 – Rdc
24 juillet 2017 – Fondation
10 juillet 2017 – Balayage
10 juillet 2017- Balayage
03 juillet 2017 – Fondation CHT
MG	Teboka Famantarana #2 : Fa maninona izy ireo no en…
MG	Teboka Famantarana #1 : Iza moa izy ireo ?